Taksi iyo basas yar yar ayaa ku fidsan caasimada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTaksi iyo basas yar ayaa ku fidsan caasimada
17 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, SAWIRADA, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Taksi iyo dolmus ayaa lagu daweeyay caasimadda
Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha, oo waqti badan ku bixisa la dagaalanka cudurada faafa oo si joogto ah uga fulisa shaqooyinka baabuurta dadweynaha, ayaa waxay bilaabeen daraasado dhanka nadaafadda ah 7 701 taksiile oo u adeega Başkent. In kasta oo taxadarka mudnaanta la siinayo caafimaadka dadweynaha mid mid loo dhaqan geliyay mid mid, Agaasinka Guud ee EGO wuxuu dib u habeeyay saacadaha adeegga sababo la xiriira fasaxa dugsiyada. In kasta oo kooxaha waaxda booliisku ay kormeereen howlaha nadaafadda iyo jeermis-ka-shaqeynta ee hoteelada ku yaal Ankara, agaasinka guud ee ASKİ ayaa si ku meelgaar ah u xiray laamaha ururinta iyo rukummada 2 goobood. Dowlada Hoose ee Magaalada ayaa iyaduna joojisay howlihii taambaradii tacsida, taas oo loogu talagalay muwaadiniinta dhimatay.
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa howlaheedii nadaafadeed ee magaalada oo dhan.
In kasta oo kooxaha magaaladu ay abaabulaan baahiyaha ka imanaya hay'adaha dawladda iyo ururada ururada aan dawliga ahayn, shaqo nadaafadeed aad u wanaagsan ayaa sidoo kale lagu sameeyaa gaadiidleyda dadweynaha ee ay adeegsadaan muwaadiniintu. Ka dib Metro, ANKARAY, Cable Car iyo Basaska, hawlo wasakhaysan ayaa ka bilaabmay taksiyo u adeega Başkent.
CODSASHADA HYGIENE EE TAXANAHA
In kasta oo daraasadaha jeermis-ka-hortagga iyo jeermis-ku-qaadidda ay ku bateen magaalada caasimadda cudurrada faafa, ee adduunka saameynaya, kooxaha nadaafadda magaalooyinka, oo ruqsaddooda la qaaday, waxay shaqeynayaan 7/24 si ay u ilaaliyaan caafimaadka bulshada.
Codsi ka yimid Rugta gawaarida gawaarida iyo darawallada wadooyinka ee Ankara, ayaa tallaabo laga qaaday si loogu dabaqo ku takri fal ku saabsan 7 701 taksiile oo ku shaqeeya Caasimadda. Kooxaha Dawladda Hoose ee Magaalada; Goobta Bakhaarka ee Kızılay waxay ku qabataa shaqada nadaafadda saddex meelood meesha ugu horeysa, iyo sidoo kale İskitler Zübeyde Hanım Mahallesi Mianka Boulevard Drivers Room Plate Workshop iyo Farsamada Kala Duwan ee Kala-taga ee loo yaqaan 'Varlık Mahallesi Yayın S Market' Market Market.
Isaga oo sheegay in ay si joogto ah u hubin doonaan shaqooyinka kala-guurka ah ee loo bilaabay dadka tagaasida, maareeyaha guud ee booliisyada, Veda Oğan, ayaa sheegay in Cevdet Kavlak, Kuxigeenka Gudoomiyaha Ragga Farshaxanka iyo wadayaasha Ankara, looga golleeyahay in muwaadiniintu ay si taxadar leh u galaan taksiyada maalmaha ugu dambeeya, wuxuu yiri:
“Hawsha jeermisku waxay ka bilaabatay 3 dhibcood oo ah taksiyadeenna tagaasida. Nidaamyadan ka dib, waxaan haynaa 450 taksi oo xiran oo hortooda lagu buufin doonaa. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno Duqa Magaaladeena Mansur Yavas, oo naga caawiyay arrintan oo siiyay tilmaamo ku saabsan buufin bilaash ah.
Isagoo sheegay inuu 15-sano jir ahaa taksi-wade, Temel Karuk wuxuu kaloo cadeeyay ahmiyada ay leedahay dalabka caafimaadka bulshada wuxuuna yiri "Waxaan ugu mahadcelineynaa madaxweynahayaga iyo degmadeena howlihii ka hortaga ee ay degmadu u qabatay dadka tagaasida." Şevket Pamukcu, Waad ku mahadsan tihiin qof kasta oo soo maray, ”ayuu yidhi.
FARAX KU SAMEEYAAN DHAQANKA IYO CIIDAMADA
Kadib baahida weyn, kooxaha BELPLAS A.Ş. ee hoos yimaada kormeerka waaxda ilaalinta iyo xakameynta ee hoos imaadka kormeerka waaxda booliska ayaa bilaabay howlihii ka hortaga ee Bentderesi iyo Gülbaba Dolmuş oo joogsanaya 2 kun iyo 56 dolmus. Isagoo sheegay in taxadarin loo sameeyay si loo nadiifiyo kuraasta, daaqadaha iyo gacantooda qaab dhismeedka gawaarida, Seyfettin Aslan, Madaxa Arimaha Arimaha Caafimaadka ee Dowlada Hoose, ayaa bixiyay qiimeynta soo socota isagoo bixinaya macluumaadka ah in shaqooyinka sunta ah ay sii socon doonaan gobolka oo dhan:
Waxaan isku dayeynaa in aan carqaladeyn barnaamijkeena nadaafadeed ee joogtada ah. Waxaan sidoo kale qabanay nadaafadda iyo jeermis-ka-hortagga basaska yar yar ee ay isticmaalaan dadka reer Ankara. Waxaan ku shaqeyneynaa isla xawaaraha darawallada tagaasida. Waxaan sii wadaynaa inaan u adeegno ku saleysan 7/24. ”
Xoghayaha guud ee shirkadda Ankara Minibuscular Rich Erşan Ağören ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay in caafimaadka guud uu muhiimad gaar ah leeyahay wuxuuna uga mahadceliyay Duqa Magaalada Metro Mansur Yavas taageerada uu la garab taagan yahay.
BASS CARRIED BY UMRED PASSENGERS HALKAN KA FURAN
3 muwaadiniin ah oo rajaynayay Ankara oo ka yimid dibedda ayaa u guuray hoteelo ku yaal Gölbaşı iyaga oo raacaya basaska EGO.
In kasta oo shaqada ka-hortaga jeermiska ay fuliyaan kooxaha BELPLAS ee ku yaal meelaha la dego ee la dejiyay, 37 basaska EGO, oo ah rakaabkii lagu soo raray, ayaa lagu daadiyey jeermis ku saabsan heerarka caalamiga ah ee Agaasinka Hawlaha 3-da Gobol. Nadiifinta gudaha iyo dibedda ee basaska, kuwaas oo miirayaasheeda dib loo cusbooneysiiyay iyaga oo u nadiifinaya nidaamka hawo, ayaa sidoo kale la sameeyay.
Seyfettin Aslan, Madaxa Waaxda Arimaha Caafimaadka, oo baaray shaqooyinka wasaqeynta goobta, ayaa yiri, “Waxaan ka hortagnay basaskeena sidda rakaabka Umrah waxaanan u badalnay shaandhaynta manka. Annaga oo ah Dawladda Hoose ee Magaalada, waxaan sii wadnaa dagaalka aan kula jirno coronavirus heerka ugu sarreeya. Dadka reer Ankara waa ay hubsan karaan in basaskaan loo nadiifiyey si tafaftiran. Haddii muwaadiniinteennu u hoggaansamaan tallaabooyinka ay shaacisay Wasaaradda Caafimaadka, dadka Ankara way ku guuleysan doonaan halganka. ”
SAACADAHA ADEEGYADA LAGUU XUKUUMAY DADKA MASS
Isagoo sheegay in basaska sidda rakaabka ka imanaya Umrah loo qaadi doono jeermi nadiif ah markii labaad waxaana loo adeegsan doonaa Talaadada, Maarso 17, Madaxa Howlgallada Gaadiidka Guud ee EGO Mustafa Geyikçi ayaa yidhi, "Waxaan qaadnay taxadarradeenna. Basaskayagii oo dhami waa la jeermisyaa. Dadka reer Ankara waxay u adeegsan karaan basaskeena si nabdoon. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsadey in Agaasinka Guud ee EGO uu sameeyay qorshe cusub oo ku saabsan gaadiidka dadweynaha (Metro, ANKARAY iyo Basaska) sababtuna ay tahay fasaxa iskuulada ee Wasaaradda Waxbarashada Qaranka, Geyikçi wuxuu yiri "Barnaamijka Adeegga Ciidda Semester-ka" wuxuu bilaabmay intii u dhaxeysay 16-30 Maarso.
ISKUULADA HANGER IYO QARAXII LOO BAAHAN YAHAY 20 KA MID AH XIDHIGII MARKA Waqtiga Ku meel gaarka ah
Agaasinka guud ee ASKİ wuxuu go’aansaday inuu xiro 20 laamood halkaas oo aruurinta biil aruurinta biyaha iyo isdiiwaangalinta lagu sameeyay baaxadda tillaabooyinka la qaadayo si caafimaadka guud looga ilaaliyo cudurrada faafa.
Iyada oo la raacayo sharraxaadda in laamaha kale ee ku yaal daafaha caasimadda ay sii wadi doonaan bixinta adeegyada isla markaana macaamiil-bixiyayaashu ay ku bixin karaan lacag-bixintooda iyaga oo u maraya PTT, internetka iyo bangiyada, laamaha aan si ku-meel-gaadh ah u siin doonin adeegyada waa sida soo socota:
Hawlgallada Kireynta ee Mamak iyo Sewing House, Dikmen, Ayvalı, Etlik, Gazino, Andaç, Erdem, Pleven, Fatih, Yenikent, Şentepe, Karşıyaka, Ilmaha hadda dhashay, Hüseyingazi, Aydınlıkevler, Mutlu, Eryaman, Güzelkent, Polatlı iyo Goobaha Ururinta peentepe. ”
DIIWAANKA HYGIENIC EE HOTELS
Hawlaha ka-hortagga faafitaanka ayaa la dardar-galiyay kadib warqad digniin ah oo ay Boliska Boliska u direen dhammaan hoteellada ku yaal Caasimadda, tas-hiilaadka hoyga iyo qubeyska.
In kasta oo Saraakiisha Booliska Ankara ay kormeereen hoteellada, haddana waxaa la kordhiyey tallaabooyinka loogu talagalay caafimaadka muwaadiniinta hoteello badan oo ku yaal Caasimadda. Markii ay baarayaan tillaabooyinka laga qaaday goobta, kooxaha Qaybta Booliska ee Dawladaha Hoose ayaa adkeysay kontoroolkooda.
Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay sidoo kale si ku meel gaadh ah u joojisay adeega teendhooyinka tacsiyeedka ee ay u fulisay muwaadiniinta dhintay si looga hortago inay dad badani samaystaan ​​oo ay faafiyaan fayraska.
Ankara Rugta Gaadiidka iyo Wadayaasha
Diyaarinta fasaxa ee Ankara Metro, Ankaray iyo Jadwalka Baska EGO